यी ३ राशी भएका श्रीमतीहरुले श्रीमानको जस्तो सुकै दुखमा पनि दिन्छन् साथ , कुन कुन राशी हुन् ? – सजल सन्देश
By Sajal sandesh	 On२० पुष २०७६, आईतवार १०:०३
श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुई पाग्रा जस्तै हुन् । किनभने एक अर्काको साथ विना जीवन असफल हुन्छ । हामीले धेरै उदाहरणहरु पनि देखेका र सुनेका छौँ । विवाहपछि श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रदा जीवन नै पुरै सखाप भयो भन्ने । ज्योतिषी शास्त्रका अनुसार राशीको मेल नहुदाँ पनि श्रीमान श्रीमतीमा झगडा हुन्छ । त्यसैले आज हामी श्रीमानको जस्तो सुकै दुखमा पनि साथ दिने राशीको बारेमा कुरा गदै छौँ । हेर्नुस् कुन कुन राशी हुन् ?
यस्तो अनौठो शिवलिंग, जसको हरेक बर्ष उचाई बढ्छ ! दर्शन गर्दा पुरा हुनेछ मनोकामना
जवान-हवल्दारको ब्यारेकमा साताको एक दिन अनिवार्य सुत्न प्रहरी अधिकृतलाई निर्देशन